एजेन्सी । दुनियाँमा को सबैभन्दा खुसी छन् ? यसको यकीन जवाफ छैन् । तर,पछिल्लो एक नयाँ अध्ययनले अविवाहित महिलाहरु सबैभन्दा खुसी रहेको तथ्य फेला पारेको छ । शीर्ष मनोविश्लेषकहरूको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । एक्लो जीवन बिताइरहेका, बालबच्चा नभएका महिलाहरु जसले घरेलु जिम्मेवारीको
लुसियान/लुसियान स्टेट युनिभर्सिटीका भेटनरी डाक्टरहरूले अपांग कछुवाका लागि व्हील चेयर तयार पारेका छन् । यसबाट कछुवाले नयाँ जीवन पाएको छ । अब कछुवा आरामले वरपर घुमफिर गर्न सक्ने भएका छ । डाक्टरहरुले पेड्रो नामक अपांग कछुवाको लालनपालन गर्दा उसको एउटा खुट्टा थिएन । केही समयपछि फर्कदा उसले आफ्नो दास्रो खुट्टा
उमेर पुगेका युवतीहरुको विवाह नहुँदा अभिभावक चिन्तित हुने गर्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । ‘लगन जुरे’पछि विहे भइहाल्छ भन्ने प्रचलन पनि छ नेपालमा त । तर, संसारमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ युवतीको लगन जुर्ने चान्स निकै कम छ । किन भने त्यहाँ केटाहरु पाउनै मुस्किल छ । केटाहरु पाउनै मुस्किल भएपछि केटीहरुले सामूहिक
भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिमण्डलमा साइकलवाला मन्त्री बनेका छन् । भारतीय जनता पार्टीबाट टिकट पाएर लोकसभा निर्वाचनमा विजयी भएका ६४ वर्षीय प्रताप चन्द्र सारंगी मन्त्री बनेका हुन् । उनी ‘ओडिशाका मोदी’ नामले पनि चिनिन्छन् । राष्ट्रपति भवनमा बिहीबार सारंगीले पदको सपथ लिएका थिए । धेरैले
कसरी यू ट्युब भिडियो बनाउने ? यी १० वर्षे स्टारबाट सिकौं,जसका ३०लाख सब्सक्राइबर छन्
१० वर्षे बालिका जो यतिबेला यू ट्युबमा निकै चर्चामा छिन् । कतिपयले उनले निर्माण गरेका भिडियो हेर्नु भएको पनि होला । उनी हुन् भारतीय बालिका अन्नत्या । उनको यू ट्युब स्टारका रुपमा स्थापित भएको कथा निकै रोचक र मर्मस्पर्सी छ । आफ्नो यू ट्युब च्यानलनमा ३० लाख भन्दा बढी सब्सक्राइबर बनाउन सफल अन्नत्या कसरी
कुकुरले गर्‍यो जिउँदै गाडिएको बच्चाको उद्धार
उत्तर थाईल्यान्डमा जिउँदै गाडिएको एउटा नवजात शिशुलाई एउटा कुकुरले उद्धार गरेको छ । पन्ध्र वर्षीया एक स्थानीय किशोरीले बच्चा जन्माएर खेतमा गाडेको प्रहरीले जनाएको छ। पान नोङ खाम गाउँमा रहेको खेतमा पिङ पोङ नाम गरेको सो कुकुर भुक्दै र भुइँ खन्दै गरेको उसको मालिकले देखेका थिए। पछि बच्चाको खुट्टा भुइँबाट
भारतीय सेनाले नेपालको मकालु हिमालको आधार शिविरमा यतीको पैतालोको छाप भेटेको दाबी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ठट्टाको विषय बनेको छ। सोमवार सेनाले ६० लाख फलोअर्स भएको ट्विटरबाट आफ्नो आरोहण दलले ‘मकालुको आधार शिविरमा’मिथक कथामा वर्णित यतीको रहस्यमय पैतालो छाप भेटेको जानकारी दिएको छ। ठूलो बाँदरजस्तो जनावरका
महिला यौन आनन्दका लागि कस्तो व्यवहार चाहन्छन् ?
अचेल चरम यौन आनन्दका लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गरिन्छ । कति जानेर त कति नजानेर त्यस्ता कार्यहरू गर्ने गरिन्छन । खासगरी महिलाहरू कस्तो अवस्थामा यौन आनन्द अनुभूत गर्छन ? यौन सम्पर्कअघि उनीहरू के गर्न रुचाउँछन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा हालै एउटा अनलाइन सर्भेक्षण गरिएको छ । महिलाहरूलाई यौन सम्पर्कका
कुुकुर मानिसको घनिष्ट र वफादार मित्र हो । कुकुर अत्यन्त चलाख र मानव रक्षकका रुपमा पनि चिनिन्छ । सामन्यतः मानिसले कुुकुर बारे राख्ने जानकारी यही हो । तर, यहाँ कुकुरबारे १० नयाँ तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ । प्राणशास्त्री तथा मानवशास्त्री जोन ब्राड शा मान्छे र जनावर बीचको सम्पर्क र आपसी व्यवहारको अध्ययन गर्छन्
२५ वर्षे तरुनीको तलब १ करोड ८ लाख !!
२५ वर्षे भारतीय एक युवती महिनाको ९ लाख तलब बुझछिन भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, भारतको बिहारकी मधुमिता कुमारलाई महिनाको ९ लाख तलब दिने गरी संसारकै ठूलो सर्च इन्जिन गुगलले नोकरीमा ज्वइन गरेको छ । गुगलले उनीसँग वार्षिक १ करोड ८ लाख भारु पाउने सम्झौता गरेको छ । मधुमिता सोमबारबाट आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी
अमिताभसँग फेस मिल्दा भाइरल बने यी शरणार्थी
चर्चित बलिउड कलाकार अमिताभ वचनको फेससँग मिल्दो अनुहार भएका एक अफगानी शरणार्थीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भारतीय मिडियाहरुले उक्त फोटोलाई चर्चामा ल्याएपछि शाबुज नाम गरेका ६८ वर्षीय ती अफगानी शरणार्थी यतिबेला भाइरल बनेका छन् । उनी हाल पाकिस्तानमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। चस्मा लागाएर
अविवाहित युवतीको यस्तो छटपटी !
उमेर पुगेका युवतीहरुको विवाह नहुदा अभिभावक चिन्तित हुने गर्छन् । त्यो स्वभाविक पनि हो । ‘लगन जुरे’पछि विहे भइहाल्छ भन्ने प्रचलन पनि छ नेपालमा त । तर, संसारमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ युवतीको लगन जुर्ने चान्स निकै कम छ । किन भने त्यहाँ केटाहरु पाउनै मुस्किल छ । केटाहरु पाउनै मुस्किल भएपछि केटीहरुले सामूहिक
उच्च तनाव शून्य डिग्रीमा झार्ने ५ सूत्र
तनाव मानव समाजको ठूलो समस्या हो । तनाव कसरी घटाउने कम गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान समेत भएका छन् । तर, विज्ञहरु मान्छेमा तनावै नहुने कुराको कल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । केही हदसम्मको तनाव मान्छेका लागि राम्रो गर्ने उत्प्रेरकको रुपमा भूमिका पनि निर्वाह गर्छ तर तनावले
राजनीति, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रका विद्यार्थीका लागि कार्ल मार्क्स कुनै नौलो नाम होइन । तर उनीसँग सम्बन्धित केही रोचक तथ्यबारे भने थोरै मानिसलाई मात्रै थाहा हुन सक्दछ । के के हुन त मार्क्सबारे रोचक तथ्य जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ ? तथ्य नं. १ कार्ल मार्क्सलाई प्राय समाजवादमा जनक भनेर थेरैले चिन्ने गरेका
संसारकै मोटा व्यक्ति, तौल ४४४ किलो
संसारकै मोटा व्यक्ति थिए । ४४ वर्षको उमेरमा उनको तौल ४४४ किलो थियो । लण्डनमा बस्ने किथ मार्टिन पछिल्ला १० वर्षदेखि आफ्नो मोटाईका कारण घरभन्दा बाहिर हिड्न सकेका थिएनन् । तपाईलाई यो कुरा पत्यार नलाग्न सक्छ तर उनलाई हरेक दिन २०००० क्यालोरीवाला शक्ति भएको खाना खान्थे । यसमा ज्यादा पिज्जा र अन्य प्रकारका जंक
यो संसार कति पुरानो होला, यस पृथ्विको आयु अझै कति बाकी होला अनि यस संसारमा अहिले सम्म कति मानिसको जन्म भयो होला यसको उत्तर सायदै कसै संग पनि छैन, छ त केबल अल्लाहसंग मात्र छ । यदि यसको उत्तर अरु संग पनि हुने थियो भने सायद बैज्ञानिकहरुले समय समयमा गर्ने गरेका भबिष्यवाणी बिफल हुने थिएनन् होला उदाहरणका लागि डिसेम्बर
बेलायती राजकुमार ह्रयारीले प्रेमिका मार्कलसँग विवाह गर्ने
काठमाडौं । बेलायतका राजकुमार ह्यारीले आफ्नी प्रेमिका अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कलसँग विवाह गर्ने घोषणा गरेका छन् । बेलायतको राजगद्दीमा आसीन हुनका लागि पाँचौं नम्बरमा रहेका ह्यारीले आगामी वसन्त ऋतुमा मार्कलसँग बिहे गर्ने र लन्डनस्थित केन्सिङटन प्यालेसको नटिङ्घम कटेजमा बस्नेछन् । सन्
कन्डमको विज्ञापनले हंगामा
ऐजेन्सी । कन्डोम सुरक्षित यौन सम्पर्क र असुरक्षित गर्भ रोक्ने प्रयोजनका लागि हो । कन्डोम बनाउने वाला कम्पनीहरु पनि आफ्नो विज्ञापनमा यो सन्देश आम मान्छेसम्म पर्याउने प्रयास गर्दछ। विज्ञापनहरुमा प्रयास हुन्छ कि नयाँ र रचनात्मक तरिकाले कुनै वस्तु वा सेवाको प्रवद्धन गर्ने । तर, रचनात्मकता को पनि एक सीमा
विचित्रको नयाँ जीव भेटियो
हार्वेले तूफानपछि टेक्ससमा चुच्चो दाँत भएको एक रहस्यमयी समुद्री जीव देखापरयो । प्रति देसाइले टेक्ससको समुन्द्री तटमा रहस्यमय प्राणीहरु देखेपछि तस्वीर खिचेर सामानिक संजालमा पोष्ट गरिन त्यसपछि यस बारेमा थप खोज सुरुभयो । उनले फोटो ट्ीवट गर्दै लेखिन‘ ठिकछ, जीव विज्ञान ट्रवीटर यो के चीज हो ।’ उनको ट्विटको
हरेक व्यक्ति हिटलरको नाम र उनका दुष्ट कार्यबारे उत्तेजित हुन्छन् । उनी आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा अपमानजनक खलनायक पात्रको रुपमा इतिहासमा चित्रित छन् । जसका हातमा लाखौं मानिसहरूको रगत लतपतिएको छ। त्यस्ता व्यक्ति एडल्फ हिटलरका केही रोचक प्रसङग पनि छन् । हिटलरको उत्पत्ति हिटलर नामक शब्द दुष्ट र तानाशाहको
यो तस्विर बाट भन्न खोजिएको छ
यो तस्विर बाट भन्न खोजिएको छ । वर्तमान समयमा धर्म र धार्मिक संगठनहरु अपराधि, ढोंगि, द्ददमभेषि, डनगिरी गर्नेहरुको शक्तिको नियन्त्रण परेका छन । उनीहरु आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन । शुद्ध धर्म पालकहरु र पवित्रतालाई शक्तिको अगाडि निरिह हुन बाध्य पारिएको छ ।
वलात्कारी ‘बाबा’ का वल्ड रेकर्ड
वलात्कारको अभियोगमा सिबीआई कोर्टबाट २० वर्षको सजाय पाएका गुरमित रामटिंगम सिंहका नाममा विभिन्न वल्र्ड रेकर्ड रहेका छन् । फिल्मको पोस्टर देखि लिएर सरसफाई जागरणका लागि आयोजित कार्यक्रममा उनले रेकर्ड कायम गरेका छन् । विविसी हिन्दी सेवाले तयार पारेको सामग्री, सबैभन्दा ठूलो फिंगर पेन्टिङ गिनीज बुक अफ
जेलभित्र लागुऔषध पुर्‍याउने परेवालाई प्रहरीले हान्यो गोली
अर्जेन्टिनाको एक जेलभित्र लागुऔषध बोकेर पुर्‍याउने एउटा परेवालाई प्रहरीले गोली हानी खसाएको छ। शुक्रबार सो जेलका अधिकारीहरुले लागुऔषध ओसारपसारमा प्रयोग भएको परेवा मारिएको जानकारी दिएका हुन्। मध्य अर्जेन्टिनाको सान्ता रोजास्थित एक जेलमा सो घटना भएको एएफपीले जनाएको छ। उडेर जेलभित्र पस्दै गरेको परेवा
८० वर्षअघि लिइएको पुस्तक फिर्ता भएपछि
पुस्तकालयबाट लिइएका थुप्रै पुस्तक फिर्ता हुँदैनन्। अझ ८० वर्ष अघि लिइएको कुनै पुस्तक फिर्ता होला भन्ने त सायदै कसैले सोच्ला। तर अमेरिकाको मासाचुसेट्सस्थित एक सार्वजनिक पुस्तकालयमा ८० वर्षअघि लिइएको पुस्तक फिर्ता भएको छ। मासाचुसेट्सको एटलबोरो सार्वजनिक पुस्तकालयले बिहीबार आफ्नो फेसबुक पेजमा यसैसाता
भारतमा ९७ वर्ष पुगेका एक व्यक्तिले एमए पास गरेका छन्। उत्तर प्रदेशको बरेलीका राजकुमार वैश्यले सोमबार अर्थशास्त्र विषयमा एमए पास गरेका हुन्। सोमबार एमए दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशित भएको थियो। उनले स्नातक पास गरेको ७९ वर्षपछि नालन्दा खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पास गरेका हुन्। उनले अर्थशास्त्रमै
भनिन्छ, कुनै पनि परिकथा पूरा हुन एक राजकुमार र एक राजकुमारीको आवश्यकता पर्छ। विवाहका लागि मात्रै पनि जोडा चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ। तर यी सबै मान्यताहरुलाई उल्ट्याउँदै इटालीकी एक महिलाले आफैँसँग विवाह गरेकी छन्। उनको विवाह समारोह पनि गतिलै थियो। उनले आफ्नो लागि विवाह समारोहमा लगाउने सेतो पहिरन, केक तयार
इण्डोनेसियामा एक भीमकाय अजिंगरलाई स्थानीयले मारेर खाएका छन्। एक स्थानीय सुरक्षा गार्डको हातमा टोकेपछि झण्डै २६ फिट लामो अजिंगरलाई मारेर खाइएको एक प्रहरीलाई उधृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। शनिबार सुमात्रा टापुको बतंग गन्सल क्षेत्रमा रोबर्ट नाबाबन नामक सुरक्षा गार्डको जम्काभेट सो अजिंगरसँग भएको थियो।
कुल पोष्ट : 28